Imaaraadka oo qaaday tallaabo lama filaan ah kadib lacagtii ay fasaxay DF - Caasimada Online
Home Warar Imaaraadka oo qaaday tallaabo lama filaan ah kadib lacagtii ay fasaxay DF
Imaaraadka oo qaaday tallaabo lama filaan ah kadib lacagtii ay fasaxay DF
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa goordhoweyd shaacisay in Soomaaliya ay ugu deeqday lacag gaareysa $9.5 Milyan, taasi oo ah gargaar bini’aadanimo oo deg deg ah.
Deeqdaan oo amarkeeda uu bixiyay Madaxweynaha cusub ee Imaaraadka Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan ayaa qeyb ka noqon doonta taakulada dadka saameynta weyn ku reebeen abaaruhu, xili ay xaalada abaareed ee dalka ay kasii dareyso.
Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in ujeedadoodu tahay in ay ka qayb qaataan daboolida baahiyaha dadka Soomaaliyeed.
Arrintan ayaa imaneysa saacado kadib markii lacagtii dowladda Imaaraadka Carabta ee dowladda Soomaaliya ay xayirtay bishii April 2018 la fasaxay, ayada oo lagu wareejiyey safiirka dalkaas ee Muqdisho.
Qoraal kasoo baxay xafiiska ra’iisul wasaare Rooble ayaa lagu yiri “Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu wareejisay Dowladda Imaaraadka Carabta lacag dhan 9.6 Milyan oo Doollar oo horay looga xayiray.”
Sii-deynta lacagtaas oo dhan $9.6 milyan ee maanta ayaa timid kadib go’aan kasoo baxay Maxkamadda Gobolka Banaadir oo lagu amray in la fasaxo lacagtaas, sida ay ilo-wareedyo ka tirsan Maxkamadda u xaqiijiyeen Caasimada Online.
Kadib go’aankaas, ayaa ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu lacagta ku wareejiyey safiirka Imaaraadka ee Muqdisho Mohamed Ahmed Al’uthman.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa 7-dii Janaayo 2022 wuxuu dowladda Imaaraadka ka raali galiyay dhacdadii bishii April 2018 ay dowladda Soomaaliya ugala wareegtay lacagtaas oo laga soo dejiyey garoonka Aadan Cadde, wuxuuna amray in la fasaxo.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa maanta u safray dalka Imaaraadka, halkaas oo uu uga qayb-galayo Aaska Madaxweynihii dalkaasi Sheekh Khalifa bin Zayed Al Nahyan ee geeriyooday.
Xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya ayaa hoos u dhacay sanadihii u dambeeyey, kadib khilaaf soo kala dhex-galay iyaga dowladddii uu hoggaaminayey Maxamed Cabdullahi Farmaajo hadase wuxuu u muuqdaa inuu isbedal ku yimid kadib doorashada Xasan Sheekh.
Dowladda Imaaraadka ayaa ka mid ah dowladaha Carbeed ee saameynta ku leh siyaasadda Soomaaliya, waxaana safiir uu ujoogaa magaalada Muqdisho, kaas oo durbo kulan toos ah la yeeshay Madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya, una hambalyeeyey.